आयु कम छ, २६ करोड लाग्छ बचाउन ! १० महिनाको बालकलाई यत्ति ठूलो रोग । (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar28media
आयु कम छ, २६ करोड लाग्छ बचाउन ! १० महिनाको बालकलाई यत्ति ठूलो रोग । (भिडियो हेर्नुस्)
August 31, 2021 August 31, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
आयु कम छ, २६ करोड लाग्छ बचाउन ! १० महिनाको बालकलाई यत्ति ठूलो रोग । (भिडियो हेर्नुस्) आयु कम छ, २६ करोड लाग्छ बचाउन ! १० महिनाको बालकलाई यत्ति ठूलो रोग । (भिडियो हेर्नुस्) यो समाचारलाई अन्तिममा राखिएको छ पुरा हेर्नुहोला, यो अर्को खबर पनि पढ्नुहोस् !!
कुनै-कुनै राशिबिचको सम्वन्ध एकदमै नराम्रो हुने र उनीहरु विचको सम्वन्ध कहिन्यै राम्रो नहुने हुनाले प्रेम र विवाह गर्न नहुने सुझाव दिइन्छ । भने केही राशिहरुमा सम्बन्धमा निक्कै मेलमिलाप पनि हुने हुन्छ ।जान्नुहोस्, जुन राशिहरुबीच प्रेम वा विवाह गर्नु नराम्रो मानिन्छः
Previous Article मेलम्चीमा फेरि पहिरो गयो, २३ दिनको बच्चा च्यापेर सुत्केरी यसरी पहिरो पार गर्दै ! (भिडियो हेर्नुस्)
Next Article घरमा आउँदैछु भनेर बस चढेका उनीहरूलाई पहिरोले लग्यो, खबरले गर्भवती श्रीमती बेहोस